प्यूठानका चार ओटा स्थानीय तहको बजेट आएन
प्यूठान । प्यूठानका ९ ओटा स्थानीय तहमध्ये ५ ओटाले मात्रै तोकिएकै मितिमा नगर तथा गाउँसभा गरेर आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । तर, अन्य ४ ओटा स्थानीय तहले भने विभिन्न कारण देखाउँदै सभा गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाको प्यूठान र स्वर्गद्वारी नगरपालिका तथा नौबहिनी, ऐरावती र मल्लरानी गाउँपालिकाले तोकिएकै समयभित्र सभा सम्पन्न गरी बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बजेटका लागि तयारी नपुगेको भन्दै झिमरुक, गौमुखी, सरुमारानी, र माण्डवी गाउँपालिकाले तोकिएको समयभित्र गाउँसभा आयोजना गर्न नसकेका हुन् । ति गाउँपालिकाले असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।
सभा सम्पन्न गरेका ५ ओटा स्थानीय तहले कुल रू. २ अर्ब ७१ करोड ३६ लाख २९ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन र विद्यमान महामारीको प्रभाव न्यूनीकरणमा यी स्थानीय तहका बजेट केन्द्रित गरिएको छ ।
गरपालिकाले आप्mनो नगरसभाबाट रू. ६९ करोड ८ लाख ५० हजार बजेट पारित गरेको छ । नगरपालिकाले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम, रोजगारी सृजना, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको हो ।
नगरपालिकाले कोरोना तथा सरुवा रोगको उपचारका लागि रू. १ करोड ८० लाख, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा रोजगार सृजना गर्न रू. ६३ लाख, स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरवृद्धिका लागि रू. ३ करोड ८५ लाख र शिक्षा क्षेत्रका लागि रू. २३ करोड ३७ लाख विनियोजन गरेको छ । यस्तै कृषि क्षेत्रका लागि रू. २ करोड २७ लाख विनियोजन गरेको छ ।
स्वर्गद्वारीले रू. ५८ करोड ६० लाख ३३ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको सातौं नगरसभाबाट उक्त बजेट प्रस्ताव गरेको हो । पालिकाले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी र कृषिलाई जोड दिएको उपमेयर गोमा रेग्मीले बताइन् ।
नौबहिनीले रू. ४८ करोड २६ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि रू. १ करोड छुट्ट्याएको छ । गाउँ फर्केका व्यक्तिलाई रोजगारी दिलाउने उद्देश्यले विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. १ करोड छुट्ट्याइएको गाउँपालिकाको भनाइ छ ।
निःशुल्क शिक्षालाई जोड दिँदै ऐरावतीले रू. ५१ करोड ८२ लाख ७० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । पालिकाले निःशुल्क शिक्षाका लागि रू. १ करोड ३० लाख, खानेपानी तथा सरसफाइका लागि रू. ३ करोड २२ लाख, सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि रू. १ करोड ९२ लाख २० हजार, भवन तथा शहरी विकासतर्फ रू. ३ करोड १९ लाख, सुशासन प्रवद्र्धनतर्फ रू. ३४ लाख र सिँचाइतर्फ रू. ६६ लाख २७ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मल्लरानीले रू. ४३ करोड ५८ लाख ४६ हजारको बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपालनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनलाई पनि बजेटले जोड दिएको छ ।